Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley iyo Jananada xukuma Ogadenya oo kordhiyay dhibaatayntii shacabka. Sabab? Noora Afgaab
Cabdi iley iyo Jananada xukuma Ogadenya oo kordhiyay dhibaatayntii shacabka. Sabab? Noora Afgaab
Caalamka iyo Itobiyada kaleba hadda ma’aha wax ka qarsoon dhibaatada ay ku hayaan Cabdi iley iyo Jananada ka taliya Ogadenya shacabka tabaalaysan. Guud ahaan Itobiya waxay hadda noqotay meel ay ka taliyaan jenanada Wayaanaha, iyadoo xukuumadda Adisababa fadhida aanay lahayn awood dhaafsan inay mushaharka u raadiyaan ciidanka iyo shaqaalaha jooga gobolada uu dalka ka kooban yahay. Waxaa lawada ogsoonyahay inaysan jirin Itobiya awood xukunta nimanka dalka sida dhabta ah u xukuma, gaar ahaan intuu dhintay Meles Zanawi oo ahaa nin adag oy ka dambeeyaan xubnaha iyo jananada ka soo dalacay ururka TPLF ee xukunka qabsaday.
Arintaa caamka ah oo Itobiya ka jirta ayaa hadana Ogadenya waxaa ugu darsamay niman u dhashay dalka ood moodo inuu joogitaankooda aduunka ku xidhan yahay baab’inita shacabkooda. Arintaana waxaa daliil cad u ah sida ay ula dhaqamaan dadka shacabka ah ee maxaabiis ahaan ugu xarerysan xabsiyada iyo xeryaha ay ka oodeen dalka. Waxyaabaha aan horey u soo marin dalka ee la yaabaka leh waxaa ka mid ah, sida dhibyaraanta ah ee Cabdi iley iyo kooxdiisa ay dadka shacabka ah u laayaan, taasoo hadda ka noqotay Ogadenya wax caadi ah oo laba qof aanay isweydiinayn xog ka badan – hebel ama qof ayay halkaa ku dileen -. Dhibaatadaa shacabka haysata dawladda dhexe waa la soo gaadhsiiyay wayna ogtahay, hasa ahaatee inay wax ka qabato ma doonayso sababa badan oo is-biirsaday awgeed. Sababahaana waxaa ugu mudan hadal laga sheegay kaligii taliyihii dhintay ee Meles mar saraakiisha joogta Ogadenya ay ka hadleen dhibka uu Cabdi iley ku hayo shacabka ayuu wuxuu ugu jawaabay, ninkan maadaama uu gacantiisa ku laynayo ilma adeeradii faraha ka qaada, hawshii aad qaban weydiin ayuu idiin qabanayaaye. Maalintaa laga bilaabo, waxay ogaadeen saraakiisha dalka joogta inuu Cabdi iley u hayo shaqo aanay iyagu qabteen.
Cabdi iley iyo kooxda ka agdhow iyo Jananada Ogadenya ka taliya waxaa hadda ku soo korodhay laba arimood oo aanay awood u lahayn inay wax ka qabtaan, waana sababaha keenay inay hadda ku gadoodaan shacabka masaakiinta ah ee miyiga laga helo ama tuulooyinka agahooda ah jooga. Sababta koowaad waa dacwada ka furantay Sweden oy ogyihiin inay heyso cadeymo maqal iyo muuqaal ah oo Cabdulaahi Xuseen uu geeyay maxkamadda oo aanay inkiri karin. Arintan waxay ka soo ooday rajadii ay ka qabeen in hadii laga qaado xukunka ay aadaan Yurub ama Mareykanka oo qaarkood ay guryo ka gateen sida la sheegayo. Sababta labaad waa dagaaladii ka dhexeeyay Itobiya iyo ONLF oo sii karaar qaatay, dhaawacya badanna la keenayo magaalooyinka maalin walba. Wararka ugu dambeeyay oo hada naga soo gaadhay Ogaadeeniya gaar ahaan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar ayaa sheegaya Dagaal aad u xooggan oo shalay makhribkii ka dhacay aagga degmada Awaare ee gobolkaasi Jarar kaas oo u dhexeeyay ONLF iyo kuwa Itoobiya, waxaana lasheegayaa in magalada jigjiga ay soo gaadheen baabuur dhaawac ah. Qofna ma xaqiijin karin dhaawaca inta uu gaadhi, laakiinse inuu ahaa dhaawac badan ayaa la sheegay. Dagalo kale ayaa ayagana ka dhacay manta magalada Gasaangas ilaa Darida. Colaada ayaa laga dareemayaa Ogadenya gabi ahaantii, waxaana hadda wada ayaa la leeyahay ONLF.
Sababahaa iyo kuwa kaloo aan ognahay iyo qaar aanan ogaynba waxay keentay in shacab badan oon waxba galabsan xabsiyada laga soo buuxiyo si loo yareeyo hayikaca shacabka iyo faraxooda marka lasoo jabiyo ciidanka Itobiya iyo kuwa la socda.
waa saad usheegta afgaab dhibku wuu socdaa dadkana dabar laguma wada xidhi karo waxaa kabadan in ta laxidhay inta baxsatay ilaa Liyu boliskii